China Electric Vibrating Foam Roller Fitness Sport Recovery Yoga Massage vagadziri uye vatengesi | Hemeikaineng
Electric Vibrating Foam Roller Fitness Sport Recovery Yoga Massage
Ichi chigadzirwa chinonyanya kufarirwa nevatengi pasi rese, uye vatengi vakawanda vanotibata kuti titenge zvakawanda. Zvigadzirwa zvedu ndezvemhando yakanaka uye mutengo wakakodzera kunaka. Kana iwe uchida samples, unogona kutibata isu kutanga, tinogona kukupa samples kuti utarise mhando.
Iyo yakanyanya kusimba inozunguza furo roller yemitambo masaja uye kupora tsandanyama. Vibration therapy (VT) inogona kuwedzera simba uye simba, kuwedzera kuyerera kweropa uye huwandu hwekufamba (ROM) mumhasuru uye kuderedza kurwadza. Iwe unogona nyore nyore kusarudza vibration level uye modhi yekushandisa kusimba kwaunoda. Inokurumidza kuchaja nebhatiri repamusoro, rakagadzirirwa vatambi vane hunyanzvi, vanofarira zvekugwinya nezvimwe.
Product Name Vibration furo roller
Muenzaniso Nha. A02-M-002
Rated Voltage/Yazvino DC 5V 2.0A
Kuchaja Nguva Anenge maawa matatu
Hupenyu hwebhatiri 5-8 maawa
Vibrating Level 4 mazinga
Kukura Kwechigadzirwa 91*91*318 mm
Net Weight 840 g
1. Dynamic texture: Unique pateni fungidziro inopa kurudziro yakadzama inoita kuti inzwe sekunge iri kudzvanya neminwe yako.
2. High Intensity Vibration: 4 yakasiyana-siyana yekudengenyeka kwemhepo ine 2 wave maitiro, unogona kusarudza chiyero chakanaka chekukurumidza uye kusimba kunoshanda kwauri.
3. Easy Battery Charging: Panzvimbo yeMicro USB, yedu yakashongedzerwa neType-C port iyo iri nyore mukushandisa uye inogona kubhadharwa zvakakwana pamusoro pemaawa matatu.
4. Hupenyu Hwebhatiri Hwakareba: 5000mAh bhatiri yepamusoro, ine hupenyu hwebhatiri hwakazara hwemaawa mana, inongoda kuchajwa kamwe chete pamwedzi.
5. Yakasimba & Yakasimba: Yakagadzirwa kubva kune zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvisingaputsi kana kurasikirwa nechimiro kubva pakudzokororwa kushandiswa, zvichitsigira zvishoma kusvika ku150Kg (330 pounds).
2. Zvigadzirwa zvakapfuura CE, FCC, ISO certification.
3. Pindura nekukurumidza uye upe sevhisi yakazara uye ine mufungo.
Zvakapfuura: Medical Oxygen Concentrator Vanhu Vakwegura High Oxygen Concentration 10L yeChipatara
Zvinotevera: UV100 Inotakurika Mini Handheld Diki LED UVC Chiedza Mwenje UV Sterilizer Wand
Tenga Vibrating Foam Roller
foam roller gym midziyo
furo roller vibrating
Foam Vibrating Roller
Massage Foam Roller Vibrating
Anoraswa Vinyl Examination Gloves
Inoraswa Vinyl General Chinangwa Magurovhosi
Inotakurika Wheelchair Kutengesa Lightweight Kupeta Wh...
2022 Mini Inotakurika Nebulizer Inhaler Breath Mota...
Novel Coronavirus (COVID-19) Antibody IgM, IgG T...